Yakanakisa Zirconia Lip brickin girazi chiravira Mugadziri uye Fekitori | FunMeet
Kuti uvandudze kudzikama kwakanyanya kwetembiricha yakachena yeZrO2 aerogels, ZrO2-SiO2 composite aerogels dzakagadzirwa nekudonhedza epoxy propane neTEOS seyesilon sosi uye zirconium nitrate se zirconium sosi. Mhedzisiro ye zirconium silicon reshiyo uye kupisa kwekupisa tembiricha pane chimiro uye zvivakwa zvemubatanidzwa maerogel akaongororwa. Mhedzisiro yacho yakaratidza kuti kana chiyero che zirconium nesilicon chaive 1: 1, iyo chaiyo nzvimbo yenzvimbo yemubatanidzwa aerogels yaive hombe, yaive 551.7 m2 / g. Iyo yakatarwa nzvimbo yepamusoro mushure mekupisa kwekupisa pa1000 C iri 239.3 m2 / g, uye iyo yakatarwa nzvimbo mushure mekurapa kupisa pa1200 C iri 89.5 m2 / g .. Inofananidzwa neiyo yakachena ZrO2 airgel, iyo ZrO2-SiO2 composite airgel yakagadzirirwa muchidzidzo chino. ine nani kupisa kusimba.
Photovoltaic Rolling Girazi Indasitiri- HP ZrO2 Composite Ceramic Lip Brick
Iyo yakachena-yakachena uye yakakwira-kuita nano-zirconia inoumbana nezvedongo yemuromo zvidhinha zvakagadzirwa neFangming NewM, Itis inoshandiswa munzvimbo yepamberi yekuumba matombo egirazi yekugadzira girazi. Hukuru hweichi chigadzirwa chatiri kugovera hunogona kuve hwakagadziriswa zvinoenderana nemutengi anodikanwa saizi. Iyo itis yakaumbwa nezvidimbu zvakati wandei zvine musono majoini uye kutsetseka kwepamusoro kunodzorwa pazasi 0,003 mm. Iyo ine yakanakisa yekupisa yekuvhunduka kugadzikana, iyo yakasimba kukukurwa kwealkine kuramba, hupenyu hwakareba hwekushandira uye yakakwira goho chiyero chegirazi zvigadzirwa nezvimwe zvakanakira. Tinogona kupa yakanyanya-yakakwira-temp. ZrO2 nano-zvedongo zvigadzirwa zvine hukuru hukuru uye akaomesesa maumbirwo, iwo anopihwa saizi masosi: Kureba kwe200-1200MM, upamhi hwe200-1000MM, uye Kureba kwe15-50MM.
Mhedzisiro yacho yakaratidza kuti mushure mullite fibers yabatwa, iyo tambo yakagovaniswa zvakaenzana mune zvinoumba maerogels uye yakaita chinzvimbo chemasaga kutsigirwa. Iyo yekumanikidza simba yeakaumbiridzwa aerogels yakawedzera pamwe nekuwedzera kwefiber vhoriyamu chidimbu. Kana iyo fiber vhoriyamu chidimbu yaive 10%, simba rekumanikidza rezvinhu zvinoumba maerogels rakasvika pa0408MPa (10% deformation). Panguva imwecheteyo, kuiswa kwefibre kwakange kusine chekuita pamatatu-mativi emambure pore dhizaini uye yekupisa yekupisa zvivakwa zvemubatanidzwa aerogels.
Ultra-yakakwira-temp isingawanzoitika pasi oxide yakasanganiswa maceramics zvigadzirwa, isu tinopa zvese-zvakapoteredzwa mhinduro dzeiyo Ultra-yakakwira-temp. tembiricha, kukwirira kwekupokana nekukwira kwevhu uye mamiriro ekushandisa.
Girazi chirafu agitator
Yakakwira Zircon Brick